भूकम्पले भत्काएको सिंहदरवार संरक्षणका लागि पहल - Radio Sagarmatha भूकम्पले भत्काएको सिंहदरवार संरक्षणका लागि पहल
भूकम्पले भत्काएको सिंहदरवार संरक्षणका लागि पहल
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको सिंहदरबार संरक्षणबारे सरोकारवालाहरूको अहिले आएर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै राणाकालीन दरबारलाई भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा हिजो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभागलगायतका अधिकारीहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारका पश्चिमी खण्डको अवलोकन गर्न लागेका छन् । यस विषयमा रेडियो सगरमाथाको बिहानी कुरामा सहकर्मी नविन लुईंटेलले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
समग्र देशको प्रतिनिधित्वगर्ने सिंहदरबारको निरीक्षण गर्न किन यति धेरै समय लाग्यो ?
ढिलो त भएकै हो, तर पनि यस्लाई हामीले अन्यथा लिनुहुँदैन । किनकी ढिलो भएपनि अब सुरु गरिएको छ । पुनःनिर्माणका अन्य धेरै कुरा जस्तै नीजि आवासको निर्माणदेखि लिएर अरु ३१ जिल्लाका पुरातात्विक सम्पदाहरू हेर्ने क्रममा यो अलिकति पछाडि परेकै हो । तरपनि अब यो निरिक्षणको काम भएको छ, यस्ले निरन्तर रुपमा गतिलिँदै जान्छ । संरक्षण गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुरा पनि द्विविधामै रहेको थियो, तर यो निरिक्षण गरेपछि अव हामी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निश्चिन्त भइसकेका छौं । त्यसैले यो काम ढिलो भएपनि यस्लाई सबैले सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हिजो गरिएको सिंहदरबारको अवलोकनको क्रममा त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
खासगरी सिंहदरबारको पश्चिमीभाग अझ बढी क्षति भएको पाइयो । त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्यो । साथै अन्य भत्किएका ठाउँहरूको सरसर्ती निरिक्षण गर्ने काम नै भयो ।
वैशाख ३१ गते हुन लागेको चुनावले यो पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभाव पार्छ की पार्दैन ?
हाम्रो पुननिर्माणमा संलग्न केही व्यक्तिहरू पनि चुनावका लागि खटिनुभएको छ । उहाँहरू त्यसतर्फ खटिएपनि पुननिर्माण प्राधिकरण अन्य युनियनहरू यथावत अवस्था मै छ । त्यो कारणले गर्दा पुनःनिर्माणको काम एकदुई दिन तलमाथि भएपनि अन्यथा निरन्तर रुपमा चलि नै रहन्छ ।